Alignment to Air Animada 3D - Joornaalka Naqshadeynta
Animada 3D Marka loo eego dhaqdhaqaaqa waraaqda hal abuurka, Jin wuxuu ku bilaabay xarfaha A. Iyo, markii ay timaado tallaabada fikradda, wuxuu isku dayay inuu arko niyado aad u xoog badan oo ka tarjumaya falsafadiisa taasoo ah mid firfircoon laakiin isku abaabuleysa isla waqtigaas. Intii uu jidka ku jiray, wuxuu la yimid ereyo is khilaafsan oo si buuxda ugu taagan fikradiisa qaab uun sida la-wareegidda hawada oo ah cinwaanka mashruucan. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, animation-ku wuxuu ku soo bandhigayaa daqiiqado badan oo sax ah oo jilicsan ereyga koowaad. Dhanka kale, tan waxay ku dhamaaneysaa dabacsan dabacsan oo dabacsan si ay u muujiso xarafka ugu dambeeya.
Magaca mashruuca : Alignment to Air, Magaca naqshadeeyayaasha : Jin Jeon, Magaca macmiilka : Jin Jeon(J2Motion).
Animada 3D Jin Jeon Alignment to Air